ios 4.3.1 ကိုjailbreakလုပ်ပြီးunlockလုပ်မရလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
ios 4.3.1 ကိုjailbreakလုပ်ပြီးunlockလုပ်မရလို့ပါ
ကျွန်တော်တော့်တော်တော်ခက်နေပြီဗျာ စိတ်ဓာတ်တောင်နဲနဲကျလာပြီ ကျွန်တော့် baseband ကultrasn0w 1.2 ကော1.2.3 ကကော support ကျွန်တော့်baseband ကိုမရဘူးပြောနေတယ်ကျွန်တော့်baseband က "05.16.02" ပါ 06.15.00 ကိုမြှင့်မှultrasn0w 2.1 နဲ့unlockလုပ်လို့ရမယ်လို့ forumတစ်ခုမှာဖတ်ရတယ် အဲ့လိုမြှင့်ဖို့ os ကို 4.2.1 ကိုပြန်ချရမယ်လို့ရေးထားတယ် လုပ်ပါအုံးဗျာကျွန်တော်တော်တော်လည်နေပြီ မနေ့ညကကျွန်တော်ultrasn0w 1.2.3 ကို cydia ထဲကနေဒေါင်းပြီးinstall လုပ်တာinstall completeသွားတယ်ကဒ်ထည့်ပြီးreboot လုပ်တာ no sim card install ပဲပြတယ် ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးကျွန်တော် sim card ကိုတစ်ခါပြောင်းပြန်ထည့်မိလို့ဆိုင်မှာသွားဖြုတ်ရသေးတယ်:) ဆိုင်ကsimကဒ်ထောက်တဲ့ pinလေးတွေနဲနဲထိသွားလို့လိုင်းတက်မတက်စမ်းပေးမယ်လုပ်သေးတယ်ကျွန်တော့ဖုန်းကlockedဖုန်းဖြစ်နေလို့ မစမ်းလိုက်ရတာကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဘာမှဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မထိလိုက်ပါဘူး။အောက်မှာ ultrasn0w 1.2.1 နဲ့ 1.2.3 နဲ့supportလုပ်တဲ့baseband တွေပါကြည့်ကြပါအုံးဗျာကျတော့်basebandလေးမှကွက်ကျန်နေခဲ့တယ် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကူညီကြပါအုံး အားကိုပါတယ်ဗျာ
Is ur iPhone 3gs?
ultrasn0w 1.2,1.33 locked until baseband 5.13. if your baseband 5.16, firstly u upgrade baseband 6.15 using redsn0w .And i want to know how to jailbreak ur iphone using redsn0w or other jailbreak sites. As i know ur jailbreaking ways, i will suggest u.
Either your SIM card is damaged or your iPhones are unable to read it *unlikely*. Try another SIM card. NO SIM means there is no SIM card in your iPhone. This issue is not related to Ultrasn0w. If there was issue with Ultrasn0w, you would have received “NO SERVICE” or “Searching…” message in your status-bar.
ဟုတ်ကဲ့ ကိုsmilelay ကိုကျေးဇူးပါ ကျွန်တော့်ဖုန်းက 3GS ပါ ကျွန်တော့်jailbreak လုပ်ပုံကိုပြောပြပါ့မယ် ကျွန်တော် CD ဆိုင်ကနေ ios 4.3.3 with jailbreak tutorial ဆိုတဲ့ dvd2ချပ်တွဲကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာredsn0w_win_0.9.6rc16 ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့ iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore(1).ipsw ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုသုံးပြီး jailbreak လုပ်လိုက်ပါတယ် သူက iOs 4.3.3 လို့ရေးထားပြီးကျွန်တော့်ဖုန်းထဲမှာဘာလို့ 4.3.1 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့နားမလည်ဘူး jailbreak ကတော့သူ့ထဲကပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲ ကျွန်တော်ကလည်းနိုင်ငံခြားကဖုန်းကိုဒီမှာသုံးချင်ရင် lock ဖြေရတယ်jailbreak လုပ်ရတယ်သာသိတာကျန်တာဘာမှမသိဘူးခုကို day ကျေးဇူးကြောင့်jailbreak အရင်လုပ်ပြီးမှunlockလုပ်ရတာသိတာ ခုအဲလိုနဲ့တစ်...နေတယ် ဆိုင်သွားလုပ်ရင်တော့ရပါတယ်စျေးလည်းမကြီးပါဘူးဒါမယ့်ကျွန်တော်ကလည်း iphone ကို jailbreak , unlock လုပ်တာတွေကိုနားလည်ချင်တယ် သင်တန်းတွေကလည်းစျေးကြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးအစ်ကိုတို့ဆီမှာမေးလိုက်တာ ကိုdayပြန်ဖြေပေးထားတုန်းကဆိုရင်အရမ်းကိုပျော်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြန်မှဖြေပေးကြပါ့မလားလို့စိတ်ပူနေတာခုတော့ကိုsmilelay ကောကကောပြောပြတော့ကျွန်တော်အားတက်သွားပြီဗျာ အထက်ကလုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော့ရဲ့ iphone ဖြစ်စဉ်ပါပဲကျွန်တော့်ကိုကူညီပါအုံးကိုsmilelay ကျေးဇူးပါ။
ကိုday ပြောသလိုကျွန်တော်ဆိုင်သွားပြီးsim cardထည့်တဲ့နေရာကို ပြန်စစ်လိုက်ပါအုံးမယ်..cydia သုံးဖို့လည်းလောလောဆယ်အဆင်ပြေသွားပြီ ဆေးရုံတစ်ခုနားလေးသွား သုံးလိုက်တာ လူကမှဘာမှမသိပါဘူးဆို software တင်မဟုတ်ဘူး hardware ပါပါလာပြီ ကျွန်တော်ကိုကလည်း sim tray ကိုပြောင်းပြန်ထည့်မိသွားတာနမော်နမဲ့နိုင်တာ။ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာခုတော့ခေါင်းကိုက်ရပြီ။ခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ။သူများတွေပညာလျှိုနေကြချိန်မှာခုလိုပြောပြပေးတာအစ်ကိုတို့ကိုအရမ်းလေးစားပါတယ်။ကျေးဇူးပါ
Dude u can easily learn the whole process of jbing n unlocking on the net n i think u need read read much only.. correct me if i'm wrong..
အောင်လိုင်း မှာ ရေးတာတွေကို ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အောင်လိုင်းက ရေးထားတာ တွေက မှားတာရှိသလို မှန်တာရှိပါတယ်။ အားလုံးကို ယုံကြည်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ မလုပ်ခင် လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ ဒါဟာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဘာပဲ။